Haween ku geeriyooday qarax saaka ka dhacay Muqdisho – Goobjoog News
Afhayeenka Gobolka Banaadir, Cali Seeko. Sawir Qaade, Munasar Maxamed Cabdi
War goor dhow soo gaaray war qabadka Goobjoog FM ayaa sheegaya in qarax miino uu saaka ka dhacay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhacay goob ay howlo nadaafadeed ka wadeen haween ku sugnaa xaafada Taleex.
Inta la xaqiijiyay saddex haween ah oo ka shaqeynayay nadaafada ayaa ku geeriyooday qaraxa, sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxan.
Afhayeenka maamulka Gobolka Banaadir Cali Maxamuud Faarax “Cali Seeko” ayaa warbaahinta u sheegay in Al-Shabaab ay haween Soomaaliyeed oo ka shaqeynayay nadaafada deegaankooda ay miino ugu qariyeen qashin ay gurayeen, kadibna ay ku qaraxday wuxuuna xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen saddex haween ah, halka uu xusay in Sideed kale oo haween ah ay ku dhaawacmeen masiibadaasi.
Sidoo kale Afhayeenka ayaa tilmaamay in dhaawaca sideeda haweenka ah la geeyay cisbitaalka Banaadir kuwaas oo sida uu sheegay ay ku jiraan kuwo xaaladoodu liidato.
Ma jirto cid sheegatay qaraxa ka dhashay goobta qashinku yaallay ee galaaftay nolosha saddexdan hooyo oo si mutadawacnimo ah u nadiifinayay goobtaas.
Wafdigii Dowladda Soomaaliya Uga Qeyb Galay Shirkii Djibouti oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay
Ylrxho ljtjpn cialis how much is cialis
Nkotnc oohsmk viagra prices when does cialis go generic
Burcad Badeedda Soomaalida Oo Laga Badbaadiyey Markab Ganacsi